China Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wardrobe Igumbi lokulala Ifenitshala # 0108 Ukwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Ifenitshala eyenziwe ngomthi
I-Oak Wardrobe Ukuthula okungcolileyo kwesilayidi soLoliwe esiTyibilikayo kwiWardrobe Igumbi lokulala Ifanitshala # 0108
Ibhanti: Ifanitshala yeAmazons
Inombolo yomzekelo: Amac-01 08
Iithagethi ezichaphazelekayo: Umdala
Ubukhulu: 1600mm * 560 * 2000mm
Umbala: Njengoko kubonisiwe emfanekisweni okanye wena
Indawo efanelekileyo: Igumbi lokulala, ihotele, isifundo
Imvelaphi: Weifang, China
Izixhobo: Umthi oqinileyo
Uyilo-lwenza ikhaya lisondele kwindalo
Injongo yethu yoqobo yayikukudala ikhaya elinestayile lodidi oluphakathi lwaseTshayina. Vumela ukukhanya kwelanga kweNordic kukhanyise ngobunono ikhaya, kwaye uyilo olulula kodwa olungelulanga luya kubuyisela ikhaya kubuhle balo benene.
I-oki emhlophe engeniswe eMntla Melika ukwenza isakhelo somthi esomeleleyo esicocekileyo
Ukhetho olungqongqo lwezixhobo lwenzelwe kuphela ifanitshala ekumgangatho ophezulu, kwaye iinkozo zendalo zamanzi ahambahambayo zizisa imeko eyonwabisayo kunye elungileyo. I-slab enkulu yenzelwe ngqo kwaye ubuchwephesha bulungile. Siqala ukusika iinkuni kwi-5-11cm. Olu ububanzi bungaqinisekisa iinkuni. Umthi ozinzileyo ukhubazekile kwaye ungabonisa ingqolowa yeenkuni epheleleyo kwaye egudileyo, emva koko umbala ukhethwe ngumchweli onamava. Iinkozo kunye nebhodi ziyahambelana.
Push-tsala idrowa + yomthi oqinileyo kwendawo yokuhlala
Idrowa yokukhupha ifanelana nebhodi yocingo emazantsi ukwenza ukugcinwa kwayo kufaneleke ngakumbi kwaye kucoceke. Izinto zabucala zinokufakwa kwidrowa, kwaye ibhodi yocingo inokuxhoma iitawuli, izikhafu, njl. Njl. Ifanitshala yenzelwe ngokukodwa izixhobo eziphezulu kunye noluhlu olubanzi lweentlobo ezahlukeneyo kunye nezinto ezahlukeneyo. Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezahlukileyo zomsebenzi kunye nokuhombisa, zonke zilandela ngokungqongqo iimfuno zemigangatho yamazwe aphesheya, kwaye ziye zafumana uvavanyo oluninzi lweasidi kunye nomhlwa ukuqinisekisa ukuba azizukukhubazeka ukusetyenziswa kwexesha elide.
Thulisa isilayidi sehardware
Isikhokelo sikaloliwe wesinyithi, egudileyo kunye ethe cwaka. Ngalo lonke ixesha uvula kwaye uvale, unokuba nemvakalelo egudileyo kunye elungileyo. Iphaneli esecaleni yandisa i-10mm kwaye ilingana nesakhelo somnyango sephakheji. Xa umnyango wokutyibilika uvaliwe, akukho sikhewu kwaye akukho luthuli.
Ikhabinethi ephezulu ehambelana nesimahla
Ngekhabhinethi ephezulu, indawo ethe nkqo isetyenzisiwe ngakumbi, kwaye ingxaki yokugcina impahla engaphandle kwexesha isonjululwa yikhabhathi enye ephezulu. Amalungu okwandisa "yindlela yokuzikhusela" yefanitshala eqinileyo yomthi, kwaye agcinelwe ukulungelelanisa iinkuni eziqinileyo kwiindawo ezahlukeneyo. Inkqubo yemveliso ilawulwa ngokungqongqo, kwaye amava emveliso atyebile. Emva kweenkqubo ezininzi zokugaya kunye nokugaya, umphezulu wemveliso egqityiweyo ujikeleze kwaye ugudile.
Akukho uyilo lomlenze wekhabhinethi
Amacandelo aphambili aqhagamshelwe yinkqubo yemveli ye-tenon kunye ne-tenon, ulwakhiwo luqinile, kwaye ii-seams ezixineneyo zinokuphucula ngokufanelekileyo uzinzo lwe-wardrobe kwaye zenze ukuba ixesha lenkonzo libe ninzi. Isiseko esime phantsi sizinzile kwaye asicocekanga, kwaye umda wamkela ulwakhiwo lwangaphakathi olunqamlezileyo ukunqanda ukungqubana ekusetyenzisweni kwemihla ngemihla.
Egqithileyo Zonke i-Wood Solid Chest yeDrawers Igumbi lokulala Igumbi lokulala ebusuku # 0103
Okulandelayo: Uhlobo olulula lweSitayile seNdlu Igumbi lokulala Ifenitshala Ibhedi # 0109
Idesika yeKhompyutha Idesika elula yeeModyuli zefanitshala 0314
Igumbi lokuhlala Solid Wood Disassembly Sofa # 0026
Heller Animal Hutch kunye Ramp Umvundla Hutch Pet ...
2019 entsha emi SUP surfboard lokuphola amanzi s ...
Iinkuni ezincinci zeNdlu encinci yeTV eQinisekileyo ...
Iifashoni kwigumbi lokuhlala kwigumbi elomeleleyo ...
Imvakalelo emva kokundwendwela iLanfang ...
Igama eliphambili kwifenitshala yeAmazons ngu-R ...
Ifanitshala yoMgangatho weFanitshala yeAmazons
Inombolo ye-300 Yuanfeng Street, Shengcheng Subdistrict, Shouguang, Weifang, ShanDong kwiPhondo, China
Sitsalele ngoku: 008613792661055